ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နဲ့ မေးခွန်းများစွာ - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရနေပြီဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းတွေလည်း အများကြီးရှိ နေနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်နေလောက်မယ့် မေးခွန်းလေးတွေကို ဆောင်းပါးလေးထဲကနေတဆင့် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကလေးတွေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရလား……
ဟုတ်။ ထိုးလို့ ရပါတယ်။ ကလေးက အသက် ၁၂ နှစ် နဲ့အထက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Pfizerကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရပါပြီ။ ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာရော ကာကွယ်ဆေးက ထိရောက်မှု ရှိမလားဆိုတာကို လိုအပ်တဲ့ သုတေသနပြုမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
(၂) COVID-19 ကာကွယ်ဆေးက ကလေးတွေအတွက် စိတ်ချရရဲ့လား……
အခုထိ လုပ်ဆောင်ပြီးသမျှ လေ့လာမှုတွေအရကတော့ Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးက ကလေးတွေမှာလည်း စိတ်ချရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာမျိုးက လူတွေကို မထိုးပေးခင်မှာ အမျိုးမျိုးသော စမ်းသပ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ထားပြီးသားပါ။ အမေရိကန်က ကလေး ၁ သန်းကျော်ဟာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်လောက်တဲ့ လက္ခဏာ တစ်စုံတရာမှ တွေ့ရှိရတာမျိုး မရှိပါဘူး။
(၃) COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အခါ ဘာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ……
အခြား ကာကွယ်ဆေးတွေလိုပဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အခါ လက်မောင်းနာတာ၊ ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အဖျားတက်တာ၊ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာလိုမျိုး သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို တစ်ရက် ကနေ နှစ်ရက်လောက်အထိ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါက ကိုယ်ခံအားစနစ်က ကာကွယ်ဆေးကို တုံ့ပြန်နေတာဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်နေတဲ့သဘောပါ။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြရရင် ဆေးအောင်တာပါ။ စိုးရိမ်စရာ မလိုတဲ့ အခြေအနေပါ။
(၄) ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ကိုဗစ် ဖြစ်နိုင်လား….
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ကိုဗစ် မဖြစ်ပါဘူး။ အခုထိလည်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုက်လို့ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့သူရယ်လို့ မရှိသေးပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးဗီဇ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးကနေ ကိုဗစ် ကူးစက်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
(၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ နို့တိုက်မေမေတွေ ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရလား…….
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ နို့တိုက်မေမေတွေလည်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးမယ်ဆို ထိုးလို့ရပါတယ်။ ကနဦး လေ့လာမှုအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကို ထည့်သွင်း လေ့လာခဲ့တာမျိုး မရှိပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအရ ကာကွယ်ဆေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက်လည်း စိတ်ချရနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရမယ့် တစ်ချက်က ကာကွယ်ဆေး မထိုးခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ပါ။
(၆) ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ရပါ့မလား….. ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်လား…….
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရဖူးတယ်ဆိုရင်တောင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့က လိုအပ်ဦးမှာပါ။ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီး သက်သာသွားချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာကြောင့် ထိခိုက်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခုခံအား ထွက်နေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ခုခံအားက ဘယ်လောက်ထိပဲ ခံမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တာကြောင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတာက အကောင်းဆုံး ပါပဲ။
(၇) ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်စဉ် ထိုးနေကျ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးထားရင်ရော ထိုးလို့ ရလား………
ရပါတယ်။ American Academy of Pediatrics (AAP) ကတော့ အသက် ၁၂ နှစ် နဲ့ အထက် ကလေးတွေကို နှစ်စဉ် ထိုးနေကျ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့အတူ တစ်ချိန်တည်းမှာ ထိုးနှံလို့ရတယ်လို့ ထောက်ခံထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးက တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးထားလည်း ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရပါတယ်။
Coronavirus (COVID-19): Questions & Answers About Vaccines https://kidshealth.org/en/parents/covid-vaccines.html Accessed Date 17 August 2021
COVID-19 vaccines for kids: What you need to know https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-vaccines-for-kids/art-20513332 Accessed Date 17 August 2021